ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှားပါးဓါတ်သတ္တုတွေ တွေ့ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောခရိုင် အလယ်သံကျော် ကမ်းခြေတစ်လျှောက် မှာ တိုက်တေနီယမ် သတ္တုအမြောက် အမြားကို ပြည်တွင်းအခြေစိုက် တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်တဲ့ ဓါတ်သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gold Finder ကုမ္ပဏီက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ် အငူမော်ကမ်းခြေ ဒုံးပိုက်ကျေးရွာက ရှားပါးတိုက်တေနီယမ် သတ္တုတွေအမြောက်အမြားပါတဲ့သဲတွေကို ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့က တွေ့ရပုံ
အဲဒီနောက်ပိုင်း တွေ့ရှိချက်တွေကို နေပြည်တော်မှာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာ အဲဒီသဲတွေထဲမှာ ယူရေနီယမ်၊ တိုက်တေနီယမ်၊ ဇိုင်ကိုနီယမ်အပါအဝင် တခြားဓာတ်သတ္တုပေါင်း ၂၀ကျော်ပါဝင်တယ်လို့ အစိုးရအရာရှိတွေရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းက အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
အခုလို ဓာတ်သတ္တုအမြောက်အမြား ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းအခြေစိုက် Gold Finder ကုမ္ပဏီရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးမောင်မောင် က ဖြစ်နိုင်ရင် ပြည်တွင်းမှာ စက်ရုံတည်ပြီး တူးဖော်ချင်တယ်လို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အဲ့ဒီကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အလယ်သံကျော်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်က နေရာ ၅ ခုမှာ တိုက်တေနီယမ်သတ္တုတွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအပြင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ် အငူမော်ကမ်းခြေ ဒုံးပိုက်ကျေးရွာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ခုနှစ်က ရှားပါး တိုက်တေနီယမ် သတ္တုတွေအမြောက် အမြားပါဝင်တဲ့သဲတွေကို ပြည်တွင်းအခြေစိုက် ခိုင်ခိုင်ကုမ္ပဏီက တစ်နှစ်နီးပါးကြာအောင် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
နေရပ်- မိုးကုတ္ျမိဳ ့
For china is mineralization the union of myanmar.
jewellery look and seek at all.
Jan 19, 2013 10:43 PM
Rapid Liberalization of Stat Economy for the interest of CRIMINALS or the people, who own it.
Jan 14, 2013 08:22 PM
Our products already finished for the future.Don't bring because will get dangers for bringers.
Jan 13, 2013 06:13 PM